भोट माग्न गृहनगर गएका निशान भट्टराईलाई किन लगियो प्रहरी चौकी ?(भिडियो सहित)... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
भोट माग्न गृहनगर गएका निशान भट्टराईलाई किन लगियो प्रहरी चौकी ?(भिडियो सहित)…
इटहरी । नेपाल आइडलका प्रतियोगि निशान भट्टराईलाई प्रहरी चौकीमा लगिएको छ । नेपाल आईडल फाईनलको संघारमै आईपुग्न लाग्दा उत्कृष्ट ३ मध्येका एक भट्टराई पूर्वका बिभिन्न क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागि हुने क्रममा आज इटहरीमा उनलाई प्रहरीले चौकी पु¥याएको हो । बिराटनगरमा कार्यक्रम सकेर ईटहरी आईपुगेका उनलाई घण्टौ अघिदेखि फ्यान तथा सुभचिन्तकले पर्खिरहेका थिए । हजारौं फ्यान माझ जब उनी झुल्किए अनि माहौलले अर्कै रुप लियो ।
कार्यक्रम स्थल आउनु पहिले नै उनले भ्यानबाट आफ्ना फ्यानलाई हात हल्लाउदै आएपछि भने हल्ला र सुसेलिले ईटहरी चोक गुन्जयमान बन्यो । उनी स्टेज चडे तर ट्र्याकमा गीत गाउन थाले पछि हल्लाले गर्दा उनले ट्र्याक बिनै मुखले मात्र यो गाउको ठिटो म लगायतका गीत गाउदै दर्शक झुमाए भने भोट अपिल पनि गरे ।
भिड थाम्न नसके पछि उनलाई स्टेजबाट ओराल्न हम्म–हम्मे पर्यो । अन्ततः उनलाई प्रहरी चौकी पुर्याउनु पर्यो । उनलाई सुरक्षाका लागि इटहरी इलाका प्रहरी कार्यलयमा लगिएको छ । प्रहरीलाई निशानका फ्यानका भिड नियन्त्रण गर्न निकै कठिन परेको थियो इटहरीमा हजारौँको सहभागिता रहेको थियो । – बिगुल न्यूजबाट साभार
के के भयो इटहरीमा हेरौँ यो भिडियो